10 इटाली कहानी किला तपाईं भ्रमण पर्छ | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 इटाली कहानी किला तपाईं भ्रमण पर्छ
त्यहाँ तपाईंले भ्रमण पर्छ इटाली कहानी महल को प्रशस्त छ! यस्तो लामो संग, धनी इतिहास र संस्कृति, यो देश महल अन्वेषण लागि जाने ठाउँ छ. तपाईंलाई मदत गर्न तपाईंको यात्रा योजना, यहाँ छन् 10 तपाईं पक्कै पनि रमाइलो गर्न जाँदै छन् इटाली कहानी महल:
1. Brolio क्यासल
तपाईं बारेमा उत्सुक हुनुहुन्छ भने को Chianti को जन्म ठाउ रक्सी, जहाँ तपाईं जानु पर्छ यो छ. यो महल सम्पत्ति भन्दा sprawls 3,000 एकड, दाखबारी र जैतून को बगैंचाहरु संग पूरा. यसबाहेक, यो बिल्कुल भव्य छ एक सूर्यास्त समयमा हेर्न भ्रमण.
टारान्टो Fasano गाडिहरु गर्न
को सुन्दर पहाड टस्क्यानी यो आँखा तेतैतिर लुकाउन महल अद्वितीय संरचनासँग. यसको १ th औं शताब्दीका मालिक यो पूर्वीय प्रभावहरु संग पुन: डिजाइन गर्न चाहन्थे. अर्को शब्दमा, उहाँले यसलाई कुनै अन्य इटालियन महल मेल गर्न सक्छन् कि एक फ्लेयर दिनुभयो.
Salerno Paestum गाडिहरु गर्न
Paestum गाडिहरु गर्न नेपल्स
3. Banfi क्यासल
विभिन्न एक बिट कुरा खोज्दै? यो महल मा, तपाईं एक आराम Getaway र सिर्फ आर्किटेक्चर को सौन्दर्य र यसको वरपर आनन्द उठाउन सक्छौं. को 1700s देखि, यो महल क्षेत्र को रोलिङ पहाड भन्दा हेरेको उभिएर अहिले छ धेरै सुविधाहरु संग होटल.
4. Valenzano क्यासल
निर्मित 10 औं शताब्दीमा, Valenzano महल अझै पनि इटाली खडा सबैभन्दा पुरानो कहानी महल को छ. आज यो अझै पनि बस रूपमा imposing र यो त थियो राजसी छ. तथापि, सट्टा नाकामा रूपमा सेवा, यो महल अब एक होटल छ, संग पूरा टेनिस कोर्ट र गल्फ कोर्स.
रोम Bracciano गाडिहरु गर्न
रोम गाडिहरु गर्न Bracciano
Bracciano Manziana गाडिहरु गर्न
Bracciano गाडिहरु गर्न सन्त Marinella
यो कहानी महल कहानी एक हजार वर्ष पहिले सुरु, र सम्पत्ति हात विजयी बीच देखि धेरै पटक साटासाट छ. तथापि, यसलाई आजकल शान्तिमय स्थान हो, धेरै खेती गुण र दाखबारी संग. पर्यटकहरू किनभने यसको आकर्षक इतिहास को यो प्रेम र सुन्दर वास्तुकला.
6. Poppi क्यासल
त्यहाँ आफ्नो टावर को एक बारेमा एउटा रोचक पौराणिक कथा छ. रूपमा स्थानीय भन्न, यसलाई आफ्नो पूर्व मालिक को एक को आराम ठाउँ छ. रिपोर्टअनुसार, त्यो त्यही टावर मा मानिसहरू गएर माथि लक गर्न प्रयोग, जो मानिसहरू रिसाउँछन्. तथापि, को पौराणिक कथा आगंतुकों आकर्षित मात्र कुरा छैन. भव्य दृश्य महल घटेका घाटिहरुमा को यात्रा यो मूल्य बनाउन.
यो प्राचीन देख महल आश्चर्यजनक दृश्य र को वास्तुकला अध्ययन गर्न एक उत्कृष्ट मौका प्रदान गर्दछ पुनर्जागरण अवधि. यसबाहेक, यो इटालियन महल बीच हजार वर्ष को बच्चाहरु को अर्को एउटा छ. यो कहानी महल फ्लोरेन्स नजिक छ, र यो एक दिन यात्राको लागि ठूलो त्यहा बाट.
पम्पी Paestum गाडिहरु गर्न
Paestum गाडिहरु शक्ति
8. Cabbiavoli क्यासल
Cabbiavoli क्यासल एक तुस्कन महल को सही छवि हुन सक्छ. यसको सुन्दर उपस्थिति संग, क्षेत्रहरू, दाखबारी, र जैतून को बगैंचाहरु, यो महल बस यो सबै छ. तपाईं त्यहाँ भ्रमण गर्दा तपाईं पनि घोडचढी जान सक्नुहुन्छ!
9. मग क्यासल
इटाली को सबै भन्दा आश्चर्यजनक महल को एक Cliffside मा precariously बैठे छ. रक्स मा भूमध्यसागर ब्रेक को छालहरू, र यो महल तिनीहरूलाई माथि looms. तपाईं भित्री यात्रा गर्न सक्षम हुने छैन, तर महल अझै पनि तस्वीर को लागि आदर्श छ.
Torre डेल ग्रीक गाडिहरु Pompeii गर्न
Pompeii Nocera तल्लो गाडिहरु गर्न
सलर्नो Nocera Inferiore गर्न गाडिहरु
सलर्नो Mercato सान Severino गर्न गाडिहरु
10. Montegufoni क्यासल
यात्री बीच सबै कला प्रेमीहरूको लागि, Montegufoni एक आकर्षक गन्तव्य हुनेछ. यो मास्क को प्रसिद्ध कोठा को घर हो, समावेश Gino Severini's भव्य frescoes. यसबाहेक, यो बिल्कुल आश्चर्यजनक देखिन्छ, र यो सबैको आनन्द उठाउन सक्छौं कि एक ठाउँमा छ.
Salerno Maratea गाडिहरु गर्न
बारी Maratea गाडिहरु गर्न
Maratea गाडिहरु गर्न नेपल्स
शक्ति गाडिहरु Maratea गर्न
इटाली मा कहानी महल हेर्न तयार? बनाउन आफ्नो छुट्टी योजना निश्चित र पुस्तक आफ्नो रेल टिकट समयमा!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 इटाली कहानी किला तपाईं भ्रमण पर्छ” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ तर लिन कृपया सक्नुहुन्छ, बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffairytale-castles-italy%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#कथा #traveleurope महल europetravel italyvacation ट्रेन यात्रा सल्लाह यात्रा